शरीरमा मुसा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? चिन्ता छोड्नुस्, यसो गर्नुस् केहि दिनमै मुसा गायब | युनिभर्सल खबर
२०७४ फाल्गुन ८, मङ्लबार
जिल्ला प्रशासन रहने कि नरहने?
सरकारलाई एनालग केबल टीभी बन्द गर्न बाटो खुल्यो
नेकपाद्वारा ८ गते नेपाल बन्दको घोषणा / सरकारी दमनका विरुद्ध पार्टी महासचिव विप्लवको कडा चेतावनी
गोरखा जाँदै गरेको बस चितवनको दासढुङ्गामा दुर्घटना, २३ जना घाइते
खुमबहादुर खड्का गम्भीर बिरामी, भोलि दिल्ली लगिँदै
युनिश्मा राइ- रबि लामिछाने चाही राम्रो अनि दिल निशानी मगर चाही कसरि नराम्रो, खाते मिडियाहरु भन्दै गालि गरिन
बिदेशमा दुख गरेर कमाएर पठाएको पैसा श्रीमतीले मोजमस्तीमा उडाएको घर फर्किँदा थाहा पाए पछि श्रीमतीको हत्या !
महोत्तरीमा युवकको विभत्स हत्या
Home स्वास्थ्य शरीरमा मुसा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? चिन्ता छोड्नुस्, यसो गर्नुस् केहि दिनमै मुसा गायब
Posted By: युनिभर्सल खबरon: October 12, 2017 In: स्वास्थ्य
एजेन्सी । हाम्रो छालामा जिवाणुको कारणले गर्दा स–सानो मासु पलाउने गर्दछ । जस्ले हाम्रो छालाको माथिल्लो तहमा असर गर्दछ । जस्ले गर्दा मासु छिटो बढ्ने हुन्छ । साधारणतया गाँठोगुठ्ठि धेरै खतरनाक हुदैंन । गाँठोगुठ्ठि प्रायजसो घाँटीमा आउने गर्दछ । यीनीहरु धेरै नै नराम्रो देखिन्छन् । गाँठोगुठ्ठि सानो मासु झुण्डिएको जस्तो देखिन्छन् । त्यसैगरी मासुको र यसको रङ्ग समान हुन्छ । यसैकारणले गर्दा मानिसहरु यसलाई हटाउन चाहन्छन् ।
गाँठोगुठ्ठिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ ? –सबैभन्दा पहिला गाँठोगुठ्ठि हो वा स्किन ट्याग ( छालाको घाउ ) हो भन्ने छुट्याउनको लागि डाक्टरलाई जँचाउनुहोस् । स्किन ट्याग पनि घाँटिमा आउने गर्दछ र यो गाँठोगुठ्ठि जस्तै देखिन्छ । तर यीनीहरु दुबैको उपचार छुट्टाछुट्टै गरिन्छ ।
फिल्म फ्लप भएर डिप्रेसन भएका बबी देवल यसरी हिट हुँदै
यसो गर्दा पनि बढ्छ आयु
सामाजिक सञ्जालमा भाईरल प्रियाले बढाइन् पारिश्रमिक
गरे के हुँदैन यो देशमा ? सबै बिदेसिदै गर्दा यी पुर्वलड़ाकु आफ्नै देशमा लोभलाग्दो व्यावसाय गर्दै
सन् २०५० सम्ममा मानिसले रोबोटसँग विवाह गर्ने, यस्तो छ दाबी
युवती मुस्कुराइरहेको यो फोटो किन बन्यो भाइरल ?
बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर तरकारी खेतीमा जम्दै युवा
कुवेतबाट फर्केर पासपोर्ट च्याति च्याउ खेती गरेका लालबहादुर वार्षिक आधा करोड आम्दानी गर्दै